बल्ल आयो क्रिकेटहरुको २ वर्षको तलब, कुन खेलाडीले कति पाए – WicketNepal
बल्ल आयो क्रिकेटहरुको २ वर्षको तलब, कुन खेलाडीले कति पाए
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ माघ २६, शनिबार २०:००
विकेटनेपाल, २६ माघ
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरुको २ वर्ष अघि देखिको तलब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले एक मुस्ट रुपमा पठाएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको खातामा आईसीसीले एकमुस्ट १ करोड २७ लाख ८७ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको खातामा जम्मा गरेको हो।
नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेपछि खेलाडीहरुलाई आईसीसीले २०१७ जुलाईमा पछिल्लो पटक तलब दिएको थियो। त्यसबेला राष्ट्रिय टिमका २३ जना खेलाडीले तलब पाएका थिए। त्यस बेला ‘ए’ श्रेणीका खेलाडीहरुको तलब रु. ३५ हजार, ‘बि’ श्रेणीको खेलाडीहरुको तलब रु. २५,००० रहेको थियो भने ‘सी’ श्रेणीको खेलाडीहरुको तलब रु. १० हजार थियो।
आईसीसीले सोहि वर्गीकरण अनुसार त्यतिबेला २०१५ डिसेम्बर देखि २०१६ डिसेम्बरसम्म १ वर्षको तलब उपलब्ध गराएको थियो। त्यस पछि २०१८ डिसेम्बरसम्मको तलब आईसीसीले दिएको हो। २०१९ मा नेपाली टिमको लागि डेब्यु गरेका खेलाडीहरुले भने अहिले तलब पाउने छैनन्।
राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक जगत टमाटा, कप्तान पारस खड्का र उपकप्तानको परामर्शमा खेलाडीहरुलाई पुनः ३ वटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको र ३ वटै विधामा ७/७ गरि २१ खेलाडीहरुलाई समाबेश गरिएको छ।
‘ए’ श्रेणीको खेलाडीहरुले मासिक ३५ हजार, ‘बि’ श्रेणीको खेलाडीहरुले मासिक २५ हजार र ‘सी’ श्रेणीका खेलाडीहरुले मासिक १५ हजारको दरले तलब पाएका हुन्।
कुन खेलाडीले कति पाए तलब
नेपाल क्रिकेट संघले सन् २०१५ मा खेलाडीहरुलाई ‘ए’ ‘बि’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई तलब दिने घोषणा गरेको थियो।
२०१५ डिसेम्बर देखि १७ डिसेम्बरसम्म राष्ट्रिय टिमको अन्तिम-११ मा नियमित स्थान बनाउने खेलाडीहरुलाई ए वर्गीकरण गरिएको छ। सिनियर राष्ट्रिय टिममा स्थान नबनाए पनि तलब पाउने एक मात्र क्रिकेटर किशोर महतो हुन्। राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिएका शक्ति गौचनले पनि तलब पाएका छन् जसलाई ‘बि’ श्रेणीमा राखिएको छ। गौचन राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाए पनि पछिल्लो २ वर्ष अन्तिम-११ मा स्थान बनाउन संघर्ष गर्दै आएका थिए। राष्ट्रिय टिममा अनियमित बनेका सुबास खकुरेल, सागर पुन, दिलिप नाथ, सुनिल धमला, सुशन भारि र बिनोद भण्डारी जस्ता क्रिकेटरहरु सी श्रेणीमा रहेका छन्।